Inguqulo 1.0.3 – Kungani ungabi angithumelele umyalezo?
August 5, 2018 by okunikezwayo Shiya amazwana
Sijabula ukumemezela inguqulo entsha, izolo ezikhishwe.
Le nguqulo imayelana imeyili sici, futhi abantu ukuphathwa translation ngcono.
Isici imeyli kuzokwenza admin ukuze uthole izaziso izinguqulo wesintu owenziwe kusayithi, in the version khulula uzothola umlayezo ngokushesha nje inguqulo entsha posted. In the okufushane umnyuziki une inketho ukuvumela imiyalezo sesikhashana (ngakho uzothola umlayezo owodwa emva umsebenzisi baye bahumusha ezinye amayunithi wezinhlamvu kusayithi). Wena ubuye zithole ithuba lokuthola digest yansuku zonke izinguqulo ezintsha ezenziwe isayithi. Ungase futhi ukhethe ikheli imiyalezo izothunyelwa ku, nje ungabhali lutho nge-imeyli womqondisi.
Esinye isici ukuthi kwaba ngcono kule nguqulo ungumhleli backend translation, kuyilapho akakuvumeli ukuba empeleni ukuhumusha phezu backend, manje ungakwazi ukuphatha izinguqulo kalula ngokusebenzisa isici zokuhlunga ukuthi ingezwe nezenzo eziyinqwaba manje ngempela ukusebenza. 🙂
Sibheke phambili ukuzwa okokufaka yakho, futhi sithemba ukuthi uzokujabulela lokhu ukukhululwa entsha
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele, Izimemezelo ukukhululwa, Izibuyekezo Software
Inguqulo 1.0.2 – Ngitshele lapho ukhona kusukela futhi ngizokulwa…
July 22, 2018 by okunikezwayo 2 Amazwana
Le nguqulo unezela ukwesekwa ukuze kutholwe based Geographic IP ebesilokhu sikhishwa sici eceliwe zokugcina ubudala ezimbalwa (Kusabusa dinos).
Umuntu unika amandla kanjani usekelo lokhu ukuthola? It yencike esihle GeoIP Ukuthola i-plugin ngu yellowtree.de. Emva kokufaka futhi isebenze ukuthi plugin inketho uzovela izilungiselelo ngezansi nje ukuthola ACCEPT_LANGUAGES unhlokweni based. Interface ngcono izovela kuwe siyoba yini umphumela ukuthola akho lapho ufinyelela iphaneli administration.
Ngaphezu kwalokho echaza, sicabangela isayithi yakho ezibhalwe ngesiNgisi futhi has usekelo Spanish. A ukuvakashelwa umsebenzisi kusuka Spain, ulimi bazophinde baqondiswe Spanish (uxhumano yokuqala esimisweni). Uma ukuhambela umsebenzisi kusuka eJalimane nakuba ulimi itholwa njenge-German kusukela ulimi ayivunyelwe isayithi kuyokudlulisela nenguqulo.
Lapho bobabili ongakhetha zinikwe amandla, the ACCEPT_LANGUAGES ozoza kuqala.
Isici kusekelwa kokubili abakhululekile okufushane umnyuziki.
Uma uthola noma yikuphi misredirection lapho lesi sici sinikezwe amandla (It anikiwe okwesikhashana lapha ukuhlolwa) sicela usazise nge ifomu contact.
Njengenhlalayenza, sethemba ukuthi uzokujabulela nguqulo.
PS. Uma usebenzisa inguqulo ngaphambi ngokugcwele kanye Isibuyekezo okufushane umnyuziki entsha alibonisi (buyekeza kuphela version khulula) unganqikazi – uthuthukela kunguqulo khulula lokuqala, ke ngokushesha ukulandela ngcono okufushane umnyuziki, kungekho izilungiselelo kufanele elahlekile.
Inguqulo 1.0.0 – Sesifikile isikhathi
June 16, 2018 by okunikezwayo 4 Amazwana
Transposh obelokhu ephila kusukela ngezinsuku zokugcina 10 edlule. Siye njalo igcinwe i-plugin olusha kusayithi lethu lapha, futhi wazama ukuqiniseka ukuthi wordpress.org okufushane imisebenzi.
Njengoba izinguqulo seniqhelelene kwaba nzima ukulondoloza izinguqulo ezimbili. Yingakho version wordpress.org safike dengwane.
Lokhu kushintsha kusukela ekukhishweni lanamuhla version 1.0.0 ku wordpress.org kanye okufushane umnyuziki 1.0.0.1, elizokuba indinganiso entsha lapha (izinguqulo ngokugcwele kuzophela wabhanselwa .1)
Yiziphi umehluko phakathi izinguqulo?
Le nguqulo wordpress.org has a 5 umkhawulo ulimi, futhi alihlanganisi noma yiziphi amawijethi.
I okufushane umnyuziki inezici eziningi, mingcele ulimi, amawijethi ukweseka, kanye ukuxhumana kwangasemuva kusayithi lethu (okuyinto ungaphuma ukususa – funda imigomo)
Yini enye engingabuye ezintsha kule nguqulo?
ihlolwe ngokugcwele PHP 7, kufanele ususe annoyances kanye Ukuhoxiswa izaziso
ukwesekwa ibalazwe Umthombo kwezikripthi yethu, ngokuvumela ukuze lungisa them kalula
Ishintsha kusukela FirePHP ukuba Chromelogger.
Jabulela usebenzisa le nguqulo!
Inguqulo 0.9.9.2 – Akulona Git
Okthoba 5, 2017 by okunikezwayo 32 Amazwana
Le nguqulo lwalulude ekwenziweni, lutho fancy kakhulu lapha, kwamaphutha for wordpress 4.7 futhi kuze, ngezilimi ezingaphezu wanezela (117!)
Okunye kwedivayisi kwamaphutha izinto evamile.
Lokhu wathatha indlela eside kunalokho okudingekile ngoba saba ukushintshela imvelo kusukela svn ubudala futhi ibukhali kuya Git entsha bese ethembisa. Yikuphi uye edabukisayo ngempela up lokhu kukhululwa. Enethemba ukuthi izokhipha izinguqulo ezintsha nge emifushane isikhathi ifreyimu.